Nhau - Iyo musimboti uye zvakanakira yevhavha poda chisanganiso
Simba uye R&D
Sausage & Ham Kugadzira
Kuumba Zvigadzirwa Kugadziriswa
Noodles & Pasita Kugadzirwa
Frozen Chikafu Kugadzira
Yakabikwa Chigadzirwa Kugadzirwa
Snack Chikafu Kugadzira
Petfood Kugadzira Solution
Zvimwe Zvitsva Zvigadzirwa
Fekitori VR Kuona
Iwo musimboti uye zvakanakira yekuzora bundu chisanganiso
Mukugadzirwa kwehupfu zvigadzirwa, mukanyiwa kusanganisa inzira inoenderana zvakananga nehunhu hwehupfu zvigadzirwa. Nhanho yekutanga yekukanya kubvumira iyo furawa mbishi kuti itore hunyoro, iyo iri nyore kune calendering uye kuumba mune inotevera maitiro. Uye zvakare, hupfu hwakatsetseka hunofanirwa kunyatsotora mvura panguva yekukanya kuita kuti iyo gluten iri muupfu iite maratidziro. Huwandu hwehunyoro hwakasanganiswa neupfu hunogadzirisa pamhando yeiyo hupfu chigadzirwa.
1. Maitiro musimboti wemuchina wekusanganisa muchina:
Vhuvhosi yekukanya zvinoreva kukanya mukanyiwa uri pazasi uye kumanikidza kwakashata. Hupfu hwegorosi zvinomutswa nemvura pasi pekumanikidza kwakashata. Nekuti hapana chipingamupinyi chemamorekuru emhepo, inogona kutora mvura zvakazara, nekukurumidza uye zvakaenzana, nokudaro ichisimudzira mapuroteni network dhizaini. Shanduko, ichivandudza zvakanyanya mhando yezvigadzirwa zvemudhu.
2. Maitiro ekushanda kwemuchina wekusanganisa muchina:
● Inofananidzwa neyakajairwa kukanda tekinoroji, inogona kuwedzera hunyoro hwehupfu ne10-20%.
● Mvura yemahara muhupfu inoderedzwa, uye hazvisi nyore kunamatira kune chinotenderera panguva yekuumburuka; iyo bundu diki idiki, uye iyo yekudyisa yakawedzera yunifomu uye yakasununguka.
● Hura yegorosi inonwiwa mvura zvakaenzana uye zvakazara, uye gadziriso yemutobvu ye gluten yakanyatsoumbwa, izvo zvinogona kuita mukanyiwa wegoridhe muvara, uye zvinowedzera zvakanyanya kuwanda uye simba, kuitira kuti ma noodles apedzwa ave anonaka, akatsetseka, anotsemuka, uye asingabatike (kuderedzwa kupera).
● Kukosheswa kwemuchina kunotora maviri-nhanho-kumhanyisa kusanganisa, kumhanya-kumhanyisa-mvura-hupfu kusanganisa, uye kukanda-kumhanya-mhanya. Nekuti iyo nguva yekuvhengana ipfupiswa uye hapana mweya unopikisa, haingoderedze chete kushandiswa kwesimba, ine simba rakakosha rekuchengetedza uye mhedzisiro yekudzora mhedzisiro, asi zvakare inochengeta mukanyiwa uchidziya. Iyo tembiricha inokwira inoderedzwa neinenge 5 5 -10 ℃, iyo inodzivirira iyo denaturation yeprotein nekuda kwekunyanyisa tembiricha kumuka kwehupfu uye inokuvadza iyo gluten network network.
Post nguva: Chivabvu-12-2020
Hebei Ainister Kunze & Export Kutengesa Co., Ltd.